Special ဟက်ကင်းလက်နက်များ | Myanmar Black Hacking
4 Special ဟက်ကင်းလက်နက်များ
NiktoNikto သည် Open Source (GPL) နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး
web server မျာကို scan ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။
web sever များအပေါ် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲပါ.
web server များကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်သော files/CGIsဖိုင် ၃၅၀၀ကျော်ပါဝင်ပြီး.sever 900 ကျော် version မျိုးစုံပါဝင်ပြီး....
လိုအပ်သလို scan ဖက်နိုင်ပြီး update လည်းလုပ်ပေးနိုင်သည်။
စုပျုံတင်တဲ့အခါမှာ junk files လေးတွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်.
အဲဒီjunk filesများရှင်းလင်းရာတွင်သုံးသော လက်နက်လေးဖြစ်ပေည်။
junk files များဖြစ်နေတာကိုရှင်းလင်းပေးပါမည်...
အားပျော့တဲ့ protocol တွေရှိတဲ့နက်ဝေါ့တွေပြင်ဆင်ရာမှာသုံးစွဲတဲ့.. လက်နက်လေးပါ...
PuTTY သည် SSH client port ဖြစ်ပြိး Nokia 9200
ယခု ဒေါင်းလုပ်ပေးထားတဲ့ဗားရှင်းမှာ SSH protocol ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
featuring high speed discovery,
vulnerability analysis of your security posture.
Nessus scanners can be distributed
throughout an entire enterprise,
inside DMZs, and across physically separate networks
Hping သည် coomand line များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး. TCP/IP packet assemble သို့
TCP/IP packet ကိုသိရှိလိုလျှင် ညာဘက်အောက်နား taskbar ၇ှိ Local area
network icon ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီး
sent နှင့် recieveကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ping(8) unix command ပါဝင်ပြီး
Hping ဖြင့်.ICMP echo requests ကို ပေးပို့နိုင်သည်။
traceroute mode ပါရှိသောကြောင့် h
TCP, UDP, ICMP and RAW-IP protocols များတွင်သုံးသည်.
ပိတ်ထားသော channel များအကြားဆက်သွယ်ပေးပြီး အခြားသော
WPA ကီးအတွက်အသုံးပြုသော လက်နက်လေးပါ။
၎င်းလက်နက်ကို သုံးစွဲသူတစ်ယောက်၏ default firefox
browser အားxml format တွင်
standard output အနေဖြင့်ပြောင်းလဲရာတွင်သုံးသည်။
SniperSpy ဖြင့် အဝေးကစ်ကွန်ပျူတာတွင်တပ်ဆင်ခြင်း
တစ်ဖက်လူမမြင်အောင် stealth mode (ပုံစံပျောက်)တဲ့ remoter စနစ်ပါဝင်ခြင်း
facebook, gtalk, bank account (password များကိုမှတ်သားပေးခြင်း)
snipper spy ဆော့ဝဲကိုအဝေးကစ်စနစ်ဖြင့်မသိမသာတပ်ခြင်းခံလိုက်ရသော
တစ်ဖက်လူ၏ကွန်ပျူတာအား ပိတ်နိုင်ခြင်း ဖွင့်နိုင်ခြင့် Logon လုပ်နိုင်ခြင်း
စသောအစွမ်းထက်သည့် ကီးလှော်ကာ ပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။
Labels: Hacking Tutorials . Knowledge . PC Software . Scanner Tools . SQL Tools
sniperspy ကို တင်ပေးလို့ရမလား ခင်ဗျာ ရှာရခက်ပါတယ်.ဒါပေမဲ့ ရှာရမယ်ဆို တင်ပေးပါလာဗျာ.ကျွန်တော်ရျာနေတာ ကြာပါပြီး
May 9, 2016, 7:48:00 PM
Jun 30, 2016, 3:06:00 AM
Google - type ' how to use '
Aug 14, 2016, 5:36:00 AM
sniperspy က keylogger ဆိုတော့ ဟိုဘက် PC မှာခိုးပီးထည့်ထားရမှာပေါ့နော်
Nov 23, 2018, 10:56:00 PM